Semalt: Ireo singa Top 6 amin'ny serivisy tranonkala
Ny fanangonam-bokatra no fomba tsara indrindra hanangonana vaovao avy amin'ny Internet. Tany aloha, ireo mpampiasa aterineto sy ireo mpikirakira ny freelancer dia afaka nanangona ny angona raha tsy nanana fahaiza-manao fahaiza-mandrindra izy ireo, fa ankehitriny dia maro ny fitaovana fanariam-pako no natomboka. Mozenda dia iray amin'ireo fandaharan'orinasa tsara indrindra . Manana aterineto mahafinaritra izy io ary ahafahanao mamoaka ny angon-drakitra tsy misy fahaiza-manao programa. Ireo manam-pahaizana Mozega dia nanangana tranonkala an-jatony maro izay manolotra pejy an-tapitrisa an-tapitrisany amin'ny ora iray. Ny halaliny sy ny halalin'ny traikefa dia tsy misy tsy manan-tsahala, ary izy ireo dia tsara amin'ny famoronana vahaolana avo lenta ary mamaha ny olan'ny olana. Ny endri-javatra miavaka indrindra amin'ny Mozenda dia voafaritra etsy ambany.
Top Feature # 1: Data azo amonoana sy azo havaozina
Amin'ny Mozenta, mora ho an'ny olona rehetra ny manisy rakitra azo vakina sy azo henoina ao anatin'ny minitra vitsy. Tsy sahala amin'ireo serivisy mahazatra hafa, i Mozenda dia manampy anao hamoaka vaovao avy amin'ny tranonkala dynamique. Mamoaka ny rohy tsy misy ilàna azy izany ary manintona haingana haingana ny angon-drakitrao. Ankoatra izany, i Mozenda dia mamorona làlan-dazaka maivana ao amin'ny tranonkala kininina izay mahatonga anao ho mora aminao ny hikapoka pejy maro araka izay azo atao.
Top Feature # 2: Data tsy misy fahalalahana
Maro ireo fitaovana fandinganana tranonkala manaisotra ny angon-drakitra, saingy misy hadita marobe sy fitsipika maro. Tsy toy ireo serivisy ireo i Mozenda ka nahatonga anao ho marina sy tsy misy diso ny angon-drakitra ao anatin'ny fotoana fohy. Raha te hikotika tranonkala maro ianao ary miahiahy momba ny kalitao, tokony hanandrana an'i Mozenda avy hatrany ianao. Tsy vitan'ny hoe hanaparitaka ny angon-drakitrao ianao, fa hanara-maso ny kalitaony ary hanala ireo fahadisoana rehetra amin'ny vokatra farany.
Top Feature # 3: Tsy misy fikojakoana ilaina
Tsy toy ny raozy sangisangy (Mozambika), i Mozenda dia tsy mila fikojakoana ary azo ampiasaina any na aiza na aiza. Na dia tsy manana fahaizana ampy fahaiza-programana aza ianao, dia afaka mampiasa io fitaovana mora ampiasaina io mba hahazoana ny angon-drakitra. Ankoatra izany, tsy mitaky anao ny manoratra ny code HTML. Noho izany, i Mozenda dia toy izany ihany koa ho an'ireo mpandahateny sy tsy mpandrindra.
Top Feature # 4: Fomba fampidirana mora kokoa amin'ny raharaham-barotra
Amin'izao tontolo iainan'ny raharaham-barotry ny angon-drakitra izao, ny olona samihafa dia mifandray amin'ny fanadihadiana momba ny angona sy ny fanangonana data. Ny orinasa dia mikaroka fitaovana fandinganana tranonkala izay mampanantena haingana ny vokatra. Miaraka amin'i Mozenda, afaka manamboatra raharaham-barotra an-tserasera ianao ary manamboatra karazana data tsy misy olana. Mizara ny orinasa i Mozenda noho ny fifandraisany amin'ny raharaham-barotra. Tsy tsara ho an'ny marika fanta-daza ihany fa ho an'ny fanombohana sy bilaogy manokana ihany koa.
Top Feature # 5: Web site dynamic
Mozenda no hany fitaovana izay miasa miaraka amin'ny tranonkala dynamique ary manangana sy mamorona ny angon-drakitra ho an'ireo mpampiasa azy. Tsy mila manoratra scripts ianao ary afaka manomboka manangona angon-drakitra anatin'ny segondra. Mozanda dia hahazo fampahalalana mahasoa ho anao amin'ny tranonkala dynamique ary hanamboatra ny angon-drakitra tsy voaaro, hamerenana ny vaovao marina sy diso.
Top Feature # 6: Manohana ny format isan-karazany
Mozenta dia hamoaka ny angon-drakitra ary hamadika azy ho CSV, JSON, XML ary XLS format. Azonao atao ny mamonjy ny angon-drakitra ao anaty orinasa na maimaim-poana any amin'ny fiara sarotra anao. Plus, Mozenda dia afaka manala lahatsoratra sy sary ho an'ireo mpampiasa Source .